Dow of Dogs - အသိုင်းအဝိုင်းသတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
အမျိုးအစား: အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ
Durig ၏ Dow ၏ Dogs သည်ထူးကဲသောဖျော်ဖြေသူနှင့် Dow of Dogs ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နည်းလမ်းတစ်ခုလား။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇူလိုင်လ 27, 2020 ဇူလိုင်လ 25, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
ကျနော်တို့နှိုင်းယှဉ်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုယူ အဆိုပါ Dow ၏ Durig Dogs ကို အမှ အဆိုပါ Dow ၏ Element တွေကို Dogs ကို။ အခုကျွန်တော်တို့သုံးနှစ်ပြီးသွားပြီ၊ နှစ်နှစ်ကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ၂၀၂၀ ကကျွန်တော်တို့မှတ်မိနိုင်သမျှအဆိုးဆုံးထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝများအတွင်းယခုနှစ်စျေးကွက်ကဲ့သို့သောစုစုပေါင်းပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဖူးလားဟုကျွန်ုပ်တို့မေးခွန်းထုတ်သည်။ ကောင်းမကောင်းနှစ်များတွင်မည်သို့ပြုခဲ့သနည်း အဆိုပါ Dow ၏ Durig Dogs ကို ၎င်း၏အနီးဆုံးပြိုင်ဘက်မှတက် stack?
Dow of Dow of Dogs: ၉.၉၇% ကျသည်။
Dow of Dow of Dogs - ၁၄.၄၃% ကျသည်။
*Dow ၏ Durig Dogs ကိုပြု၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ၄၄% ပိုကောင်းသည်။ ၎င်းသည်ခက်ခဲသောနှစ်ဖြစ်သဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောပြန်လာခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပင်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။
ကနေဒါ Dividend Aristocrats - ခိုင်မာသောအမျိုးမျိုးသောမဟာဗျူဟာနှင့်အတူမုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုတွင်ပြင်းထန်သောစွမ်းဆောင်မှု
ဇူလိုင်လ 16, 2020 ဇူလိုင်လ 15, 2020 မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်	မှတ်ချက် Leave
ကျနော်တို့ကထည့်သွင်းကတည်းက ကနေဒါ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် အစုလိုက်အပြုံလိုက်, ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးနှစ်လနှင့်နှစ်လရဲ့ကျော် 23% ကျော်ရရှိခဲ့သည်။ အထွက်နှုန်းသည် ၆.၉၅% ဖြင့် ၇% အောက်သာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ကျစရိတ်သုံးလတစ်ကြိမ်ပြန်လည်မျှတမှုမရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြင့်ဆုံးအထွက်နှုန်းရှိသောဘဏ်နှစ်ခု (CIBC, TD Bank) ကိုပေါင်းထည့်ပြီးအခြားဘဏ်နှစ်ခု (ဘဏ်၏ Montreal နှင့် Nova Scotia ဘဏ်များ) ကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ TD သို့မဟုတ် Toronto Dominion ဘဏ်သည်အထွက်နှုန်းမြင့်မားရုံသာမကငါးနှစ်တာကာလအတွင်း Montreal Bank (BMO) ထက်သာလွန်သည်ကိုသင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ နှစ် ဦး စလုံးဘဏ်များတစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားအစုစုအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးရှိသည်။
S&P ၏ခွေးများအတွက်ခွဲဝေရရှိမှု ၅% ကျော် - ၎င်းသည်ဘွန်းရန်ပုံငွေထက်ပိုလား။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 28, 2020 ဇြန္လ 29, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
နောက်ကွယ်မှရိုးရှင်းမှု၊ အောင်မြင်မှုနှင့်ထိရောက်မှု အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများငါတို့လည်းစခဲ့တယ် S & P 500 ၏ခွေးများ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ။ လူတိုင်းကစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး“ ဘယ်အစုစုကပိုကောင်းတယ်၊ အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ or S & P 500 ၏ခွေးများ?” ကျနော်တို့စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းကနှစ် ဦး စလုံးအစီအစဉ်များအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်အများအပြားဇယားအတွက်ထားကြပြီ။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 21, 2020 ဇြန္လ 20, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 14, 2020 ဇူလိုင်လ 16, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
ကျနော်တို့ကို update လုပ်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ စွမ်းဆောင်ရည်။ ၄ င်းသည်ပထမ ၃ နှစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ပြီးသောထူးခြားစွာစုစည်းထားသောအမြတ်အစွန်းအစုစုဖြစ်သည်။ ဝင်ငွေမြင့်မားစွာဖြင့်သာလွန်သောစုစုပေါင်းအမြတ်ငွေကိုရရှိရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။လောလောဆယ် ၄.၂၄% မှာ) အားကြီးသောနိယာမတိုးတက်မှုနှုန်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်။ ပြီးခဲ့သည့်3နှစ်တာကာလအတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ခဲ့သည် ၁၁.၀၂% ဖြင့်တစ်သက်တာပြန်လာခြင်း.
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 7, 2020 ဇြန္လ 8, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 2, 2020 ဇြန္လ 1, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
ကျနော်တို့မိတ်ဆက်ပေးဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် ဥရောပ၏ခွေးများ။ ဤအစုစုသည်အမြတ်အစွန်းများ၊ ကြီးထွားမှုနှင့်ဥရောပအပြာရောင်ချစ်ပ်နှင့်အလယ်အလတ်အရွယ်ကြီးထွားမှုစတော့များကိုတိုးပွားမှုခွဲဝေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါအစုစုကိုလက်ရှိ 6% ကျော်ပေးဆောင်နေသည်။ ဤသည်ခွေးအစုစုကိုအလွန်ခိုင်မာသောမြတ်များကိုလက်ခံရရှိနေစဉ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့်ဝင်ငွေကြီးထွားရန်ရှားပါးအလားအလာရှိပါတယ်။ ဥရောပ၏အမြတ်အစွန်းမြင့်သောစီးပွားရေးသို့ကွဲပြားခြင်းသည်အမေရိကအတွက်ဥရောပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းကသာလွန်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် COVID 19 ရောဂါကူးစက်ပြီးနောက်ဥရောပစျေးကွက်များကကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့နှင့်ပြုတ်ကျသွားသည်။
ကနေဒါ Dividend Aristocrats အစုစုသည် ၇% ကျော်သောအနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ကိုရရှိသည်
မေလ 22, 2020 မေလ 21, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
ရေ တီထွင်ခဲ့သည် Candian Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် ပိုမိုလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှု၊ အသစ်တင်ထားသောအခမဲ့ကုန်သွယ်မှုနှင့်အီလက်ထရောနစ်စာရွက်စာတမ်းအွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုတို့ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ သုံးလတစ်ကြိမ်ပြန်လည်ထိန်းညှိခြင်း၊ ကနေဒါအထက်တန်းလွှာများရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပိုမိုထိရောက်သောချဉ်းကပ်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရုံသာမကကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုနှင့်အတူ Durig ခွဲဝေ Dogs ကို နှင့် S & P 500 အစုစု နှင့် ကနေဒါပိုင်းခြားခွေးများ ငါတို့သည်လည်းစတင်နေကြသည် ကနေဒါ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် ကျောက်တံတား။
ကနေဒါ၏ကွဲပြားသောခွေးများသည် ၉.၁% အထက်အမြတ်အစွန်းဝင်ငွေရှိသည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 13, 2020 မေလ 12, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
အောင်မြင်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူငါတို့မှတ်တမ်းတင် အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ နှင့် S & P ၏ခွေးများ ကျွန်ုပ်တို့သည်အောင်မြင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစံချိန်စံညွန်းကိုရယူပြီးအမြတ်အစွန်းများများများပြားလာသည့်သမိုင်းကြောင်းဖြင့်ကနေဒါကုမ္ပဏီများအားအမြတ်အစွန်းမြင့်မားစွာအမြတ်အစွန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပုံစံတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ဤ ကနေဒါခွဲခြား Dogs ကို အသစ်သောအစုစုတစ်ခုဖြစ်သည်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအပေါ်အထူးမှတ်တမ်းတင်ထားသောအဘယ်သူမျှမလမ်းကြောင်းရှိသည်။ သို့သော်ဤကုမ္ပဏီများမှရရှိသော ၀ င်ငွေသည်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်မှန်းထားသည့်ပမာဏထက်များစွာပိုမိုများပြားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သဘောပေါက်ကြသည်။ လက်ရှိထုတ်လုပ်သောဝင်ငွေစီးကြောင်း ကနေဒါခွဲခြား Dogs ကို ငါတို့ခွဲခြားနိုင်သည့်အခြားဝင်ငွေအမျိုးအစားနီးပါးထက်များစွာမြင့်မားသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤကနေဒါကုမ္ပဏီများသည်ဤနှုန်းထားများနှင့်အမြတ်များကိုဆက်လက်ပေးဆပ်နေရသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ခန့်မှန်းချက်သည်ဤအစုစုသည်ကောင်းစွာကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်လိမ့်မည်ဟုဖြစ်သည်။ သူတို့ကတစ်နှစ်အတွင်းခွဲထားတာကိုမြှင့်တင်မပေးရင်ဒီအစုစုကိုသုံးလတစ်ကြိမ်ပြုပြင်ပြီးပြီ။ ဒီကုမ္ပဏီကိုအစုရှယ်ယာထဲကနေဖယ်ထုတ်လိမ့်မယ်။ အခုတော့ဈေးကွက်ထဲမှာတည်ငြိမ်နေပုံရတယ်ထင်လို့အခုကျနော့်အမြင်မှာပိုပြီးဖြစ်နိုင်ချေရှိလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ကနေဒါကုမ္ပဏီအမြောက်အများအမြတ်အစွန်းများမကြာမီအနာဂတ်တွင်ဖြတ်တောက်ခံရသည်။ အချို့သောစတော့များက၎င်းအတွက်စျေးနှုန်းဖြစ်သည့်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့အမြင်တွင်အန risks တရာယ်အများဆုံးသောပြprovidingနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Dow ၏ Dogs၊ Pandemic ၌စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်းနှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးအမြင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅.၁၅% အမြတ်အစွန်းဝင်ငွေ
မေလ 10, 2020 ဇူလိုင်လ 16, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
Covid 19 သည်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုဇောက်ထိုးလှည့်နေသည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားများအားလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မုန်တိုင်းကိုကောင်းစွာတိုက်ဖျက်ပြီးရေရှည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက်လုပ်ဆောင်နေပြီးသောအစီအစဉ်များကိုအာရုံစိုက်ချင်ခဲ့သည်။
ဘို့ ရေ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအလွန်အလုပ်လုပ်ပုံရသည် အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများရိုးရာမော်ဒယ်မဟုတ်ပါ ရေသုံးလတစ်ကြိမ်ပြန်လည်ချိန်ခွင်လျှာနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သောအလေးချိန်ကိုပိုမိုအဆင့်မြှင့်တင်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုကိုအသုံးချပြီး၊ အခမဲ့စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုကြောင့်များစွာပိုမိုခိုင်မာလာစေသည်။ အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ ခေတ်နောက်ကျနေပြီ၊ ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာသိခြင်းသည်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖြစ်သည်။
မေလ 3, 2020 မေလ 1, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
Durig ၏ Dow ၏ခွေးသည်အထက်နှင့်အောက်စျေးကွက်များတွင်သာလွန်ခဲ့သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 13, 2020 ဇူလိုင်လ 16, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
ကျနော်တို့အခြေခံစံနှုန်း Durig ရဲ့ Dow မှ Dow ၏ Dogs ကို ဂျုံးစ်၏ပျှမ်းမျှ ETF နှင့် S&P ၅၀၀ ခွဲများ၊ ပြီးခဲ့သည့်သုံးနှစ်ကသူလုပ်ဆောင်ခဲ့ပုံကိုကြည့်သည်။
စျေးကွက်အားတိုင်းတာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်သည် - Benchmarks နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Alpha, Beta နှင့် Excess Returns ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ စျေးကွက်အကြီးအကျယ်ကျဆင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသော Covid ၁၉ ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါကြောင့်အပြင်းအထန်ကျဆင်းပြီးနောက် ၄-၉-၂၀၂၀ တွင်အောက်ပါပိုလျှံသည့်အမြတ်နှင့် Alpha စံသတ်မှတ်ချက်များကိုကျော်လွန်ခဲ့သည်။
Dividend Aristocrats အစုစုသည်ဝင်ငွေကို ၄.၈၈% ရရှိပြီးပြန်လာရန်နေရာချထားပါသလား။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 9, 2020 ဧပြီလ 8, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
ရေ တီထွင်ခဲ့သည် S & P Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် အသစ်သောအခမဲ့ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သုံးလတစ်ကြိမ်ပြန်လည်ချိန်ခွင်ပေးခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းစာရွက်စာတမ်းဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ခေတ်မီခြင်းနှင့်အထူးပြုချဉ်းကပ်ခြင်းတို့ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအစုစုသည် S&P 500 ၏မြင့်မား။ ကြီးထွားလာသောအမြတ်အစွန်းနှစ်ခုလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ရန်ရိုးရှင်း။ ပိုမိုထိရောက်သောနည်းလမ်းကိုပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုနှင့်အတူ Durig Dogs ကို S&P 500 အစုရှယ်ယာများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့စတင်ရောင်းချနေသည် ကနေဒါ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် နှင့် ဥရောပသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်များကိုခွဲခြားခဲ့သည် ကျောက်တံတား။
S&P မှခွေးများသည်ခွဲတမ်းဝင်ငွေ ၅.၂၂% ရရှိသည်
ဧပြီလ 5, 2020 ဧပြီလ 8, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
ရေ ၏အောင်မြင်မှုကိုယူပြီးတီထွင်ခဲ့သည် အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ ထို့နောက်ပိုမိုလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှု၊ သုံးလတစ်ကြိမ်ပြန်လည်ချိန်ခွင်များနှင့်တက်ကြွသောချိန်ခွင်များကိုအသုံးချခြင်း၊ Dow of the Dogs ကိုပိုမိုထိရောက်စေခြင်း၊ ပိုမို၍ ခေတ်မီ။ အထူးပြုချဉ်းကပ်မှုကိုထပ်မံထည့်သွင်းခြင်း၊ အခြား“ Dogs” အစုရှယ်ယာများကို S&P 500 တွင်အသုံးပြုခြင်းကိုခေါ်ဆိုပါ က S & P 500 ၏ Dogs ကို။
ဘယ်လိုလဲ S & P 500 ၏ခွေးများကိုပြုလေ၏ အစပြုကတည်းက? ဒါဟာစောလွန်းသေးပေမယ့်ပုံပေါ်ပါတယ် S & P 500 ၏ခွေးများ နှင့် အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ တစ် ဦး ချင်းစီကတခြား outprefromacing ၌မိမိတို့အလှည့်ယူပြီးနေကြသည်။ တစ်ခုမှာ ၂၀၂၀ ၏ပထမသုံးလပတ်တွင် Dow ကဲ့သို့စျေးကွက်ကျဆင်းမှုနှင့်နီးစပ်ခဲ့သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 3, 2020 ဇူလိုင်လ 16, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
Coronavirus သည် ၀ င်ငွေမြင့်မားသော ၀ င်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ဖြစ်တည်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုကြောက်ရွံ့နေသည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဖေဖေါ်ဝါရီလ 29, 2020 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2020 မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်	မှတ်ချက် Leave
Coronavirus (COVID-19) ၏ကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့သွားမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့် ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်အသစ်များအနိမ့်သို့မောင်းဆက်လက်ပါးရည်နပ်ရည်ရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းများကိုသတိပြုသင့်သည် ကြီးမားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရောင်း - ချွတ် ဖန်တီး။
အဆိုပါ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ Coronaviruses အပေါ်:
Coronaviruses (CoV) သည်များသောအားဖြင့်အအေးမိမှအရှေ့အလယ်ပိုင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ Syndrome (MERS-CoV) နှင့်ပြင်းထန်သော Acute အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ Syndrome (SARS-CoV) ကဲ့သို့သောပိုမိုပြင်းထန်သောရောဂါများအထိရောဂါဖြစ်စေသောဗိုင်းရပ်စ်များစွာသောမိသားစုများဖြစ်သည်။
Coronaviruses တွေဟာတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့လူတွေကြားမှာကူးစက်တယ်။ ရောဂါကူးစက်မှု၏လက္ခဏာများမှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ၊ အဖျားခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ပိုမိုပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်ကူးစက်မှုသည်အဆုတ်ရောင်ရောဂါ၊ ပြင်းထန်သောစူးရှသောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ပျက်ခြင်းနှင့်သေခြင်းကိုပင်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ coronavirus ဝတ္ထုသစ် (nCoV) သည်ယခင်ကလူသားများတွင်မဖော်ထုတ်နိုင်သောမျိုးစိတ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ”
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2020 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 21, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
Diebold Nixdorf ဘွန်းများ၊ ကာလတို၊ မြင့်မားခြင်း၊ ပုံသေ ၀ င်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2020 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
ဒီနှောင်ကြိုးပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင် Durig သည်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းရှိဘဏ်များနှင့်လက်လီအရောင်းဆိုင်များကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုလေ့လာသည်။ Diebold Nixdorf (NYSE: DBD) ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်လက်လီလုပ်ငန်းနှစ်ခုစလုံးအတွက်ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များအပါအ ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အ ၀ ပါ ၀ င်သည်။ ၄ င်း၏စတုတ္ထသုံးလပတ်ရလဒ်များကိုထုတ်ပြန်ခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နေပုံရသည်။ အချို့ပေါ်လွင်ချက်များတွင် -
Dog of the Dow: ဝင်ငွေ 4% နှင့်အတူအပြာရောင် Chip Dividends
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 13, 2020 ဇူလိုင်လ 16, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
ဤသုံးသပ်ချက်သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်သည် အဆိုပါ Dow အစုစု၏ခွေးများ သောတစ် ဦး တည်းမြတ်များဝင်ငွေ 4% ကျော်ထုတ်လုပ်သည်၀ င်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုအစုရှယ်ယာရှင်များပေးနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်းစစ်ဆေးသည်။
(စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးသည် 2-10-20 ကဲ့သို့အခကြေးငွေမယူပါ။ )
အာလဖ 1.89 (vs. Benchmark *)
၏ Beta ကို 0.77 (vs. Benchmark *)
အဆိုပါ အဆိုပါ Dow အစုစု၏ခွေးများ ထုတ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည် စတော့စျေးကွက်ထက်မတည်ငြိမ်မှုလျော့နည်းနှင့်အတူအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှမြတ်များဝင်ငွေမြင့်မား။ နှင့်အတူ ပျမ်းမျှအမြတ်အစွန်း 4% တစ် ဦး တည်း၏အထွက်နှုန်း နှင့်တစ်ဦး တစ်သက်တာပြန်လာမှု ၁၂% ကျော်, အ အဆိုပါ Dow ရဲ့ Dogs ကို နှစ်များတစ်လျှောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်၎င်း၏ပြန်လုပ်နိုင်မှုနှင့်အရွယ်ပမာဏအပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Durig ရဲ့အတွက်စတော့ရှယ်ယာသော်လည်း အဆိုပါ Dow အစုစု၏ခွေးများ ဖြစ်နိုင်သည်ထက်တစ်နှစ်မှတစ်နှစ်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်, သူတို့ကိုရွေးချယ်ဖို့အသုံးပြုတဲ့နောက်ခံဖန်သားပြင်အတူတူပင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
ရေ ထံမှအမြင့်ဆုံးအထွက်နှုန်းအမြတ်အစု၏အုပ်စုတစုကိုရှာဖွေနှင့်ရွေးချယ်သည် Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှ (DJIAမျက်နှာသာထဲကလဲကြပြီဖြစ်သော)ခွေးများဟုခေါ်သည်) နှင့်တစ်နှစ်အဘို့ထိုသူတို့ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဤ“ ခွေးများ” သည်သူတို့၏ရှယ်ယာစျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍“ ပြေးရန်နေရာပိုများ” လေ့ရှိသည်။
Durig's Dow of the Dow သည်ရိုးရှင်းသော်လည်းထိရောက်သောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်အား ၀ င်ငွေပိုမိုရရှိစေရန်အထူးဖန်တီးထားသည် ခွဲဝေဖမ်းယူ အမြင့်ဆုံးအလျှော့ပေးလိုက်လျောအပြာရောင်ချစ်ပ်စတော့ရှယ်ယာအချို့ကို၏ Dow Jones ။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှရရှိသောအမြတ်ဝေစုများသည်စုစုပေါင်းအမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည် နှင့်အလားအလာအစုစုကိုထုတ်လုပ်သည့်မြတ်များဝင်ငွေကြီးထွား။
ဘာကြောင့် Blue Chip Dividend Stocks?
သမိုင်းကြောင်းအရအပြာရောင်ချစ်ပ်ခွဲဝေမှုစတော့များသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြသခဲ့သည် အောက်ဖက်စျေးကွက်ဖိအားအောက်မှာဒဏ်ခံဖြစ်လိမ့်မည်အမြတ်အစွန်းမပေးသောစတော့များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် hectic စျေးကွက်များ၌တည်ငြိမ်မှုကိုပေးနိုင်သည်ဟုယူဆကြသည်။ ထို့အပြင်ခွဲဝေပေးသောကုမ္ပဏီများသည်တည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေနှင့်ကြီးထွားမှု၊ ထိရောက်သောစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဏ္asာရေးစသည့်ခိုင်မာသည့်အခြေခံများရှိသည်။
အပြာရောင်ချစ်ပ်များမှပေးသောခွဲဝေမှုသည် ၀ င်ငွေစီးဆင်းမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကူညီနိုင်သည်။နှင့်ဝင်ငွေရရှိမှုအချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှငွေကြေးဖောင်းပွမှုကိုကျော်တက်ပြီးသင်ကြိုးစားရရှိသောဒေါ်လာ၏တန်ဖိုးကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤအမြတ်ဝေစုများသည်သမိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်သာမက၊ မကြာသေးမီဆောင်းပါး:
“ 2002 ၏စျေးကွက်ကျဆင်းမှုအတွင်း၊ အမြတ်ငွေမပေးသောစတော့ရှယ်ယာများသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့် 30% ကျဆင်းသွားသည့်အခါ၊ ခွဲဝေပေးသောအစုရှယ်ယာများသည်သာမန်အားဖြင့် 10% ကျဆင်းသွားသည်။ စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းများသိသိသာသာကျဆင်းသွားသော 2008 ဘဏ္crisisာရေးအကျပ်အတည်းအတွင်း၌ပင်အမြတ်အစုသည်အစုရှယ်ယာမဟုတ်သောစတော့ရှယ်ယာများထက်သိသိသာသာပိုမိုကောင်းမွန်ခဲ့သည်။
Durig ရဲ့ အဆိုပါ Dow အစုစု၏ခွေးများ တစ် ဦး အတွက်အလွန်ထိရောက်နိုင်ပါတယ် အခွန်အဆင်ပြေ အကောင့် (ထိုကဲ့သို့သော Ira အဖြစ်) အမြတ်အစွန်း (သို့) ခွဲဝေခွဲဝေမှုများကိုအခွန်မဆောင်သောကြောင့်၊ သင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွန်လွတ်ကြီးထွားခွင့်ပြု.
အပြာရောင်ချစ်ပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအများစုသည်များပြားလှသောအပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေဖွဲ့စည်းပုံတွင်ပါ ၀ င်ကြသည်။ အကျိုးအမြတ်များနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုမျှဝေရန်ကောင်းသည်ဟုထင်ရသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်ပေါင်းစပ်ထားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များ၊ လျှို့ဝှက်အခကြေးငွေများကြောင့်မလိုလားအပ်သောအခွန်အကောက်များကိုထိရောက်စွာဖန်တီးနိုင်သည်။
တစ် ဦး ချင်းစီစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပါးသောလူအုပ်ကိုရှောင်ပါ အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ အများကြီးသန့်ရှင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပတ်ဝန်းကျင်ကမ်းလှမ်းသောအကောင့်။
Dogs of the Dow ဖြင့်ယနေ့ပိုမိုကောင်းမွန်သောအငြိမ်းစားယူခြင်းကိုစတင်ပါ။
Dow of the Dogs နှင့်အခြားသက်ဆိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ပတ်သက်သောနောက်ဆုံးသတင်းများရရှိရန်အောက်တွင်စာရင်းသွင်းပါ။
အဆိုပါ အဆိုပါ Dow အစုစု၏ခွေးများ ရှိပါတယ် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအမြတ်အစွန်းများပြားသောဝင်ငွေကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည် နှင့် လျော့နည်းသမိုင်းမတည်ငြိမ်မှုနှင့် 4% ကျော်ကျော် မြတ်များဝင်ငွေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများလုပ်နိုင်တယ် ညမှာပိုလွယ်အောင်အိပ်ပါ.
ပိုပြီးများအတွက်ဆန္ဒရှိသောသူတို့အဘို့ ဝင်ငွေနှင့်လျော့နည်းမတည်ငြိမ်မှု အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၀ င်ငွေတိုးရန်အလားအလာရှိသော Durig's နှင့်အတူ အဆိုပါ Dow အစုစု၏ခွေးများ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့, အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါတယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ထောက်ခံမှု သင်သည်သင်၏ဝင်ငွေရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးနေထံအပ်နှံ။
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရလိုပါက Durig's အဆိုပါ Dow အစုစုကိုမဟာဗျူဟာ၏ခွေးများ, မခေါ်ကျေးဇူးပြုပြီး ရေ at (971) 327-8847, ဒါမှမဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ info@durig.com.
ဖွင့်လှစ်ခြင်း: အဓိကအသုံးပြုသောအခြေခံစံနှုန်း * SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr ဖြစ်သည်။
ဥရောပခွဲတမ်း Aristocrats - တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ င်ငွေအဖြေ
ဇန်နဝါရီလ 29, 2020 ဇန်နဝါရီလ 29, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
Durig ၏ ၀ င်ငွေဖြေရှင်းနည်းများကိုနောက်ဆုံးဖြည့်စွက်သည့်ကြေငြာချက်ကိုကြေငြာခဲ့သည် ဥရောပ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အစုစု။ ဒီလိုမျိုးအစုစုထဲကတစ်ခုကအမြင့်ဆုံးအထွက်နှုန်းအပြာရောင်ချစ်ပ်စတော့ရှယ်ယာ ၂၀ (*) ကိုပစ်မှတ်ထားတယ်။အစုစုတွင်ကျင်းပအမှန်တကယ်အာမခံဖြစ်ကြသည် အမေရိကန်အပ်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ နှင့်ထိတ်များကဲ့သို့ကုန်သွယ်) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ဥရောပဖလှယ်မှုအမျိုးမျိုးတွင်စာရင်းပြုစုထားပြီးအမြတ်အစွန်းမြင့်သောဝင်ငွေနှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၀ င်ငွေတိုးပွားလာရန်အလားအလာကိုထုတ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ စိတ်ကူးမှာလက်ရှိမြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းများနှင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအမြတ်တိုးများပြားလာသည့်သမိုင်းကြောင်းရှိသည့်ကုမ္ပဏီများ၏စတော့များကိုသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်အမြတ်ဝေစုတိုးမြှင့်ပေးသောကုမ္ပဏီများအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်းသည်ဥရောပဖလှယ်မှုအမျိုးမျိုးရှိမြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းကုမ္ပဏီများမှ၏ "သီးနှံပင်မုန့်" ကိုတသမတ်တည်းသိမ်းဆည်းရန်အစုစုကိုနေရာချသင့်သည်။
ဥရောပခွေးများ - ၀ င်ငွေကောင်းတဲ့အဖြေတစ်ခု
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 23, 2020 ဇန်နဝါရီလ 23, 2020 ဥရောပ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
Durig ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုအစုစုအတွက်နောက်ဆုံးဖြည့်စွက်ချက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည် ဥရောပ၏ခွေးများ။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၀ င်ငွေတိုးရန်အလားအလာရှိသောဥရောပအပြာရောင်ချစ်ပ်များ၏အရည်အသွေးမြင့်ခွဲဝေမှုကိုဖမ်းယူရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောဤအစုစုမဟာဗျူဟာအသစ်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားဥရောပရှယ်ယာခေတ်ရေစီးကြောင်းတွင်အကူအညီနှင့်ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ပါဝင်ရန်ခွင့်ပြုသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မှတ်ပုံတင်ထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်.
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 18, 2020 ဇန်နဝါရီလ 17, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
Community Health Systems Bonds (CYH)၊ ၁၇% YTM သည်မြင့်မားသောအထွက်နှုန်းနှင့်ရင့်ကျက်သောရင့်ကျက်မှုများကိုပေးသည်
ဇန်နဝါရီလ 9, 2020 ဇန်နဝါရီလ 11, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
ယခုအပတ် Durig သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လူသိအများဆုံးကုန်သွယ်သောဆေးရုံကုမ္ပဏီများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရပ်ရွာကျန်းမာရေးစနစ်များ (NYSE: CYH) အမြတ်အစွန်းအများဆုံးသောနေရာများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ဆေးရုံများ၏ဆေးခန်းများ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤအခွဲများ၏ရလဒ်များကိုစတင်တွေ့မြင်လာပြီးကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အပြုသဘောတိုးတက်မှု၏လေးပုံနှစ်ပုံကိုရပ်တည်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောနောက်ဆုံးသုံးလပတ်ရလဒ်များအရ၊ တူညီသောစတိုးဆိုင်မက်ထရစ်သည်အထူးကောင်းမွန်သည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္in၌ပါ ၀ င်သည်။အပေါ်ကျည်ဆံများကိုကြည့်ပါ).
ဇန်နဝါရီလ 9, 2020 ဇန်နဝါရီလ 16, 2020 မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်	မှတ်ချက် Leave
ဝင်ငွေ Aristocrats: အဆင့်မြင့်ဝင်ငွေ, လျော့နည်းအိပ်စက်ခြင်းည
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2019 ဇန်နဝါရီလ 16, 2020 ဝင်ငွေ Aristocrats	မှတ်ချက် Leave
၎င်းရဲ့အောင်မြင်မှုကိုလိုက်နာပါ အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ နှင့် S&P 500 Portfolios ၏ခွေးများ, ငါတို့ယခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစုစုကိုမှနောက်ဆုံးပေါ်ဖြည့်စွက်, မှာအသေးစိတ်မှာကြည့်ပါ ဝင်ငွေ Aristocrats အစုစု။ အမြတ်အစွန်းများသော ၀ င်ငွေ aristocrats သည်ထူးခြားကောင်းမွန်စွာကွဲပြားခြားနားသောအစုစုဖြစ်သည် သုံးကွဲပြားခြားနားသောအစုစုကိုမဟာဗျူဟာရောနှောနေခြင်း (Fixed ဝင်ငွေ 2, S & P 500 ၏ခွေးများ, ပြီးနောက် မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်) ငွေသားစီးဆင်းမှုထုတ်လုပ်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်သို့။
အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများကထပ်လုပ်ပါ
နိုဝင်ဘာလ 28, 2019 ဇူလိုင်လ 16, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုစူးစမ်း စွမ်းဆောင်ရည် ၏ အဆိုပါ Dow အစုစု၏ခွေးများ, တစ် ဦး တည်းမြတ်များဝင်ငွေနီးပါး 4% အတူနှင့်အစုရှယ်ယာတွင်ကိုင်ထားသူများကဲ့သို့အပြာရောင်ချစ်ပ်ခွဲဝေအစုရှယ်ယာအမြောက်အမြားကိုစဉ်းစားသည်။
တစ်နှစ် -to-date ဖြစ်အောင်ပြန်လာ 13.03%
၏ 1 တစ်နှစ်ပြန်လာ Trailing 10.31%
အာလဖ 4.47 (vs. Benchmark *)
၏ Beta ကို 0.75 (vs. Benchmark *)
Diebold Nixdorf အနှောင်ကြိုးများ၊ ကာလတို၊ အမြတ်အစွန်း၊ ၀ င်ငွေ ၀ င်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ 12% YTM ကျော်လွန်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick နိုဝင်ဘာလ 24, 2019 နိုဝင်ဘာလ 22, 2019 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
ယခုအပတ်၏နှောင်ကြိုးပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွက် ရေ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဘဏ်များနှင့်လက်လီရောင်းချသူများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ထုတ်ပေးသူတစ် ဦး ကိုကြည့်သည်။ Diebold Nixdorf (NYSE: DBDဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်လက်လီလုပ်ငန်းများအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ Diebold သည် 2019 အားလုံးကို၎င်း၏ DN Now အစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏တတိယသုံးလပတ်ရလဒ်များကိုထုတ်ပြန်ခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီသည်ဤရည်မှန်းချက်များပြည့်မီအောင်ဆောင်ရွက်နေသကဲ့သို့ဖြစ်သည် (အပေါ်ကျည်ဆံများကိုကြည့်ပါ).
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick နိုဝင်ဘာလ 22, 2019 နိုဝင်ဘာလ 21, 2019 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
Dividend Aristocrats - အချိန်ကျော်လာရင်ဝင်ငွေတိုးလာတယ် + သမိုင်းကြောင်းထက်သာတယ်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick နိုဝင်ဘာလ 21, 2019 ဇန်နဝါရီလ 16, 2020 မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်	မှတ်ချက် Leave
ဒီသုံးသပ်ချက်မှာ Durig ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစုစုကိုကိုင်ထားသည့်အတွက်နည်းလမ်းများကိုလေ့လာသည် မြတ်များပေးဆောင်, အရည်အသွေးမြင့်မားသော အပြာရောင်ချစ်ပ် စတော့ရှယ်ယာနိုင်ပါတယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားများစွာလိုအပ်သောတည်ငြိမ်မှုကိုကူညီပေးနိုင်သည်.
(စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးသည် 11-15-19 ကဲ့သို့အခကြေးငွေမယူပါ။ )
As အမေရိကန်နှင့်တရုတ်အကြားကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှု ဆက်လက်၍ ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များဆက်လက်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်။
Durig ဖြေရှင်းချက်ကိုတွေ့တော်မူပြီ အပြာ chip ကိုမြတ်များထိတ်။
S&P 500 ၏ခွေးများသည်ဘုတ်အဖွဲ့တစ်လျှောက်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွယ်တူချင်းများဖြစ်သည်
နိုဝင်ဘာလ 17, 2019 ဇူလိုင်လ 16, 2020 S & P 500 ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
ရေ ၎င်း၏များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစံ S & P 500 အစုစု၏ခွေးများ နှင့်မည်သို့ကိုင်ပြီးစူးစမ်း တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားအစုစု of အပြာ chip ကိုမြတ်များထိတ် ယနေ့စျေးကွက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုအကျိုးပြုနိုင်သည်။
တစ်နှစ် -to-date ဖြစ်အောင်ပြန်လာ 32.02%
၏ 1 တစ်နှစ်ပြန်လာ Trailing 26.07%
အာလဖ 4.52 (vs Benchmark *)
၏ Beta ကို 0.73 (vs Benchmark *)
နိုဝင်ဘာလ 9, 2019 နိုဝင်ဘာလ 8, 2019 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick အောက်တိုဘာလ 27, 2019 ဇန်နဝါရီလ 16, 2020 မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်	မှတ်ချက် Leave
ဒီအထူးသုံးသပ်ချက်မှာ ရေ ၎င်း၏များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစံ သုံးထူးခြားတဲ့အပြာ chip ကိုရှယ်ယာတွင်လည်း, အ အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ, S & P 500 ၏ခွေးများ, ပြီးနောက် မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်, အရာအလုံးစုံဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ် အရည်အသွေးမြင့်အပြာ chip ကိုခွဲဝေဖမ်းယူ Wall Street ရှိနာမည်အရှိဆုံးကုမ္ပဏီအချို့
Dividend Aristocrats - ဝင်ငွေတည်ငြိမ်မှုနှင့်အချိန်နှင့်အမျှကြီးထွားမှု
အောက်တိုဘာလ 23, 2019 ဇန်နဝါရီလ 16, 2020 မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်	မှတ်ချက် Leave
Durig ၏အလွန်အောင်မြင်သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အစုစု ကြောင်းကိုလည်းအခြားမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်မြတ်များအစုစုနှင့်အတူအစုစုနှိုင်းယှဉ်။ အဆိုပါ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အစုစုကိုဖြစ်ခဲ့သည် စိတ်ကိုလည်းဝင်ငွေတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူဒီဇိုင်းAristocrats ဟုလူသိများသည့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအပြာရောင်ချစ်ပ်ကုမ္ပဏီများကိုသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအာရုံစိုက်သည်။
(စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးသည် 10-18-19 ကဲ့သို့အခကြေးငွေနှင့်မကိုက်ညီပါ)
တစ်သက်တာ 9.44% ပြန်လာ
ပိုလျှံပြန်လာ၏ 3.27% (စံသတ်မှတ်ချက် vs. ) *
အာလဖ 7.95 (အခြေခံစံနှုန်း vs. )
၏ Beta ကို 0.18 (အခြေခံစံနှုန်း vs. )
S&P 500 ၏ခွေးများ - ခိုင်မာသောသမိုင်းဝင်စွမ်းဆောင်ချက်ဖြင့် 4.5% ကျော်ဝင်ငွေ
အောက်တိုဘာလ 17, 2019 ဇူလိုင်လ 16, 2020 S & P 500 ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
၏တစ် ဦး ကအခြေခံစံနှုန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြန်လည်သုံးသပ် ရေထူးခြား S & P 500 အစုစု၏ခွေးများ ထိုအစုစုသည် ၀ င်ငွေအကျိုးအမြတ်ကိုစစ်ဆေးပြီးသက်တမ်းတစ်လျှောက်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအချို့ကိုလည်းရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
တစ်နှစ် -to-date ဖြစ်အောင်ပြန်လာ 20.38%
၏ 1 တစ်နှစ်ပြန်လာ Trailing 17.63%
အာလဖ 1.69 (vs Benchmark *)
၏ Beta ကို 0.72 (vs Benchmark *)
Chesapeake စွမ်းအင်နှောင်ကြိုးများ၊ တိုတောင်းသောကာလ, မြင့်မားသောအထွက်နှုန်း၊ ၀ င်ငွေရှိသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ 9.5% YTM
အောက်တိုဘာလ 16, 2019 အောက်တိုဘာလ 23, 2019 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
ဒီအပတ်, ရေ သဘာဝဓာတ်ငွေ့အပေါ်သမိုင်းကြောင်းကိုအာရုံစူးစိုက်မှုမှရေနံထုတ်လုပ်မှုကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီကိုကြည့်သည်။ Chesapeake စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန (NYSE: CHK) ယခုနှစ်တွင်ပိုမိုရေနံအာရုံစိုက်ထုတ်လုပ်မှုအစုစုကို ဦး တည်ရန်အပြောင်းအလဲအတွက်အပြင်းအထန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ Chesapeake သည် ၄ ​​င်း၏ထုတ်လုပ်မှုအစုရှယ်ယာတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၁၇% ရှိရာဒုတိယသုံးလပတ်အဆုံးတွင် ၂၄% အထိတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီကခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ထွက်ရှိမည့် ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းကိုရေနံဖြင့်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ရေနံသည်ပိုမိုမြင့်မားသော margin ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် Chesapeake သည်၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်၏ရလဒ်ကိုတွေ့မြင်နေရသည်။အထက်ကျည်ဆံအချက်များကိုကြည့်ပါ).
Dog of the Dow: 4% ဝင်ငွေနှင့်အတူအပြာရောင်ချစ်ပ်စိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုရှာဖွေပါ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick အောက်တိုဘာလ 6, 2019 ဇူလိုင်လ 16, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
Durig's ၏လစဉ်စွမ်းဆောင်ရည်ပြန်လည်သုံးသပ် အဆိုပါ Dow အစုစု၏ခွေးများ ထိုကဲ့သို့သော Dow of the Dow ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုထုတ်လုပ်သည့် ၀ င်ငွေများသည်ထောက်ပံ့ရန်များစွာအထောက်အကူပြုသည်။
တစ်သက်တာပြန်လာခြင်း 12.87% (နှစ်စဉ်)
တစ်နှစ် -to-date ဖြစ်အောင်ပြန်လာ 8.30%
အာလဖ 4.89 (အခြေခံစံနှုန်း vs) *
၏ Beta ကို 0.77 (အခြေခံစံနှုန်း vs) *
ဝင်ငွေ Aristocrats: လျော့နည်းသမိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူမြင့်မားသောဝင်ငွေ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick အောက်တိုဘာလ 2, 2019 မေလ 19, 2020 ဝင်ငွေ Aristocrats	မှတ်ချက် Leave
ရေ ၎င်းသည်၎င်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုအစုစုတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြည့်စွက်မှုကိုအသေးစိတ်လေ့လာထားသည် ဝင်ငွေ Aristocrats။ အလွန်အမင်းကွဲပြားခြားနားသောအစုစုကို ၀ င်ငွေအထက်တန်းလွှာများသည်ချောမွေ့စွာရောနှောနေသည် Fixed ဝင်ငွေ 2, S & P 500 ၏ခွေးများ, ပြီးနောက် အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ တစ် ဦး ဝင်ငွေထုတ်လုပ်စက်သို့မဟာဗျူဟာများ။
အမေရိကန် ၀ င်ရိုးနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှောင်ကြိုးများ၊ ကာလတို၊ အမြတ်အစွန်း၊ ၀ င်ငွေ ၀ င်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ၀ င်ငွေ 6.7% YTM
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 25, 2019 စက်တင်ဘာလ 24, 2019 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
ဒီအပတ်, ရေ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကို ဦး ဆောင်သူများအနက်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောထုတ်လုပ်သူကိုအာရုံစိုက်ရန်ကားစက်ရုံကိုကြည့်သည်။ အမေရိကန်ဝင်ရိုးနှင့်ထုတ်လုပ်မှု (NYSE: AXL), driveline နည်းပညာ၏ ဦး ဆောင်ပေးသွင်း, မကြာသေးမီက၎င်း၏ဒုတိယသုံးလပတ်ရလဒ်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ EBITDA နှင့် EBITDA အမြတ်အစွန်းများတိုးတက်လာခြင်း၊အပေါ်ကျည်ဆံများကိုကြည့်ပါ).
Dividend Aristocrats - ၀ င်ငွေတိုးရန်လမ်းကြောင်း
စက်တင်ဘာလ 20, 2019 အောက်တိုဘာလ 23, 2019 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
၏တစ် ဦး ကလစဉ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြန်လည်သုံးသပ် မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အချို့သောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်တည်ဆောက်ထားသောအမျိုးမျိုးသောအပြာရောင်ချစ်ပ်စတော့ရှယ်ယာအစုစုကို အမြင့်ဆုံးအလျှော့ပေးလိုက်လျောမြတ်များပေးဆောင် အပေါ်စာရင်း S&P 500။ မတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်များ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုမဟာဗျူဟာပေးနိုင်သောအမျိုးမျိုးသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်သည်။
S&P 500 ၏ခွေးများ - ခိုင်မာသောသမိုင်းဝင်ကြီးထွားမှုနှင့်အတူ 4.66% ၏ပိုင်းခွဲမှုအထွက်နှုန်း
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 13, 2019 ဇန်နဝါရီလ 16, 2020 S & P 500 ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
ယခုအပတ် Durig သည်၎င်း၏ Dogs of S&P 500 Portfolio ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုပိုမိုနီးကပ်စွာလေ့လာပြီးယနေ့မခန့်မှန်းရသေးသောဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုပေးလိမ့်မည်။ စက်တင်ဘာစွမ်းဆောင်ရည်အထူးများ (အပေါ်မှကျည်ဆံအချက်များကိုကြည့်ပါ) ။
အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိသည့် ၀ င်ငွေမဟာဗျူဟာ
၏ Durig ရဲ့ Dogs ကို S & P ကို ​​500 Portfolio အမြတ်အစွန်းအမြင့်ဆုံး (အမြတ်အစွန်းနှင့် ပတ်သက်၍) အပြာရောင်ချစ်ပ်ကုမ္ပဏီများသည်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိခြင်းနှင့် ၀ င်ငွေများ၏အကျိုးကျေးဇူးနှစ်ခုလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ S&P 500။ အစုစုသည် ၄ ​​င်း၏မဟာဗျူဟာ၏ကြီးထွားမှုအပိုင်းတွင် ၂၀.၇၈% အထိတိုးမြှင့်နိုင်ရန်ကူညီခြင်းဖြင့် ၄ င်း၏မဟာဗျူဟာအလေးချိန်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးမြင့်အပြာခွဲဝေများကို ၄ င်း၏မဟာဗျူဟာအလေးချိန်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ၄.၆၆% ရရှိသည်။ နှင့်တစ်နှစ်လျှင် -to-date ဖြစ်အောင်ပြန်လာနှစ် ဦး စလုံးအတွက် S & P 4.66 သူ့ဟာသူ 20.78% ၏နောက်ခံတစ်နှစ်ပြန်လာ, 1 နှစ်ပြန်လာနောက်ကွယ်မှ။ ဤသည် multi multi မဟာဗျူဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှခွင့်ပြုပါတယ် ကျောင်းအုပ်ကြီးအတွက်ခိုင်မာတဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းကိုဖမ်းယူဆက်လက်၍ အမျိုးမျိုးသော ၀ င်ငွေကောင်းသည့်ဝင်ငွေကိုရရှိရန်နှင့်ခိုင်မာသောသမိုင်းဝင်အကျိုးအမြတ်ကိုခံစားနေရဆဲဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Dow ၏ Dogs ကို - မြင့် Dividends, သမိုင်းကြောင်းထက်သာလွန်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 9, 2019 ဇူလိုင်လ 16, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
Durig's Dow of the Dow - စက်တင်ဘာစွမ်းဆောင်ရည်အထူးများ
တစ်နှစ် -to-date ဖြစ်အောင်ပြန်လာ 9.41%
၏ 1 တစ်နှစ်ပြန်လာ Trailing 6.73%
Dividend Aristocrats - အချိန်ကျော်ပြီးဝင်ငွေတိုးပွားလာတယ်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 24, 2019 အောက်တိုဘာလ 2, 2019 မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်	မှတ်ချက် Leave
အဆိုပါ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အစုစု, Durig Capital ကိုအသစ်သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းသည်ယခုအခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ပွင့်နေပြီဖြစ်သည်။ ဤအစုစုမဟာဗျူဟာသည်အပြာရောင်ချစ်ပ်ကုမ္ပဏီများအကြားတွင်“ သီးနှံပင်မုန့်” ကိုပစ်မှတ်ထားသည် S&P 500အမြတ်အစွန်းအမြင့်ဆုံးရှိသောကုမ္ပဏီများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ခြင်း၏သမိုင်းကြောင်းရှိခြင်း။